SIDEE BAY MALEYTANI UGA FAA'IIDEYSAN KARTAA JIDHKA BINI'AADAMKA: SIFOOYINKA BOGSASHADA IYO KA HORTAGA ISTICMAALKA? - DAAWADA DADWEYNAHA
Faaruus - dhoobi ah oo leh xidid awood leh, taas oo la cuno sida dhirta basbaas.
Horseradish waa warshad beerta caanka ah, caleemo waxaa loo isticmaalaa alaabta ilaalinta iyo soo qaadashada jiilaalka.
Dalbo warshad iyo ujeedooyin daaweyn.
Waxyaabaha kiimikada iyo mallaariyada calorie
Maxay tahay fitamiinada aan ku jirin fareebka! Dalagga xididku wuxuu hodan ku yahay fitamiinada ku dhowaad dhammaan kooxda B: B1, B2, B3, B6; Intaas waxaa sii dheer, halabuurka waxaa ku jira fitamiin E, carotene, ascorbic iyo folic acid. Foosto waa hodan fibre, wax soo saarka iyo saliidaha lagama maarmaanka ah. Waxay ka kooban tahay amino acids, sonkorta, lysozyme (compound protein) iyo walxaha dabiiciga ah.
Horserad waa ilaha maadooyinka yaryar iyo macro: birta, manganese, copper, magnesium, potassium, kalsiyum, sodium, fosfooraska, sulfur iyo arsenic.
Qadarka fitamiin C ee malayga waa shan jeer ka badan oo ah miraha liinta iyo currants madow. In xididada iyo caleemaha geedka waxaa jira enzymes mirozina iyo saliidda allar mustard. Gawaarida Calorie waa mid hooseeya: 58 kcal 100 garaam oo badeecad ah.
Qodobbada waxtarka leh ee malayga ah ee caafimaadka
Phytoncides ee malayga waxay ka dhigtaa mid faa'iido u leh dagaalka lagaga hortago bakteeriyada fayraska, ascorbic acid waxay hagaajisaa difaac, carotene waxay faa'iido u leedahay kor u qaadida aragga, fiitamiin E waxay hagaajisaa wareegga dhiigga, iyo fitamiin B nidaamiya dheef-shiid kiimikaad.
Qodobka faa'iidada leh ee malayga waxaa loogu muujiyaa hoos u dhigista khatarta galmada. Faaruus - fuuq-xumo, isticmaalka joogtada ah wuxuu kordhiyaa rabitaanka galmada. Daawada dadweynaha, dhirta waxaa loo isticmaalaa dhibaatooyinka kaadida.
Faytamiin B1 - thiamine waxay yaraynaysaa raasamaalka sunta leh ee khamriga iyo sigaar cabista. Waxay xakameysaa waxqabadka nidaamka dareenka, taas oo si gaar ah qiimo ugu leh ragga ee shaqooyinka khatarta ah ama khatarta ku lug leh. Daroogooyinka leh malayga ayaa loo isticmaalaa in lagu soo celiyo awoodda.
Ma taqaanaa Cilmi-baarayaasha Japan ayaa ka shaqeynaya habka daawada cadayga, qaybta ugu weyn ee ay noqon doonto malayga. Daraasaduhu waxay ogaadeen in dhirta ay burburinayso bakteeriyada dhalisa xanuunka. Dharka keliya ayaa ah urka cad ee malayga, sida loo ciribtiro, cilmi-baarayaashu weli lama imaan.
Horsahad sidoo kale wuxuu faa'iido u leeyahay haweenka. Foosto leh jimicsi leh fitamiin C ayaa si fiican u dillaacsan maqaarka, fitamiin E waxay hagaajineysaa midabka maqaarka iyo awoodda dib u soo kicinta, quudiyo timaha iyo ciddiyaha. Xaaladaha faa'iidada leh malayga waxaa loo isticmaalaa daaweynta dhibaatooyinka cudurada dumarka qaarkood iyo inta lagu jiro muddada xanuunka badan ee haweenka.
Ragga iyo dumarka labka ahba waxay awoodaan in ay caadi u yeeshaan shaqada hawsha taranka. Maaddaama ay ka kooban tahay kaloriiga hooseeyo iyo nafaqooyin, rooter malayga waxaa loo isticmaalaa miisaan lumis. Dalagga dalagga wuxuu xoojiyaa habka dheef-shiid kiimikaadka, wuxuuna ka jarayaa jajabyada iyo sunta jirka.
Carotene iyo fiber - nooc ka mid ah aasaaska qaabdhismeedka jidh caafimaad leh. Carotene, iyo waxyaabo kale, waxay hagaajinaysaa aragga. Faytamiin caafimaad leh ayaa la soo ururiyey iyada oo qayb ka ah feeraha si ay ula dagaalamaan hargabka, sanka oo duuf iyo qufac.
Fudusadaha iyo miyir-qabka ku salaysan malayga, iyo sidoo kale xidid la jajabiyey ee giliga lagu daaweeyo dhibaatooyinka mareenka neef-mareenka. Dhamaan arrimahan oo dhan lama iloobi karo xilliga uu ilmuhu yimaado xanaanada ama dugsiga.
Faa'iidooyinka malayga ee jidhka ilmaha waa muuqaal, iyadoo la socota ecologii hadda, daaweynta daaweynta dabiiciga ah ee dabiiciga ah ma keeni doonto waxyeello waxyeello u geysata jilicsan, jidhka ilmaha ee soo kordhay, ka duwan kiniiniyada kiimikada iyo sharoobada.
Bakteeriyada daawada dhaqameed: daaweynta cudurrada leh caawinta malayga
Daawo-dhaqameedka ayaa ah bedel wanaagsan oo daawooyinka qaaliga ah, badanaaba burburiya microflora jirka. Cunnooyinka daawada dhaqameedka waxaa lagu tijaabiyaa jiilasha awoowayaasheena waxaana inta badan ka muuqda inay ka fiican yihiin daawada dhaqameed.
Laga soo bilaabo maleradish leh angina diyaariyo faleebo ee loogu talagalay gargling. Laga soo bilaabo saxarka ee xididdada malayga kaga daadi casiir cadaadiska. Casiirka waa in lagu qasiqiyaa biyo leh isla markaan loo siman yahay. Biyo raaci dhowr jeer maalintii kadib cuntada.
Xoq xidido malayga leh haraam (250 garaam), karkari labaatan daqiiqo saddex litir oo biyo ah.
Waa inaad cabtaa maraq saddex jeer maalintii, nus koob oo hal tallaabo ah.
Xiiso leh Haseerad - warshad baraf u adkaysta, waxaa laga helay xitaa meel ka baxsan Arctic Circle.
Qub 150 garaam oo xidid malayga leh leh Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah, tuujin juice laba liin. Qaado shaaha hal mar maalintii maalintii cuntada kadib.
Horseradish xidid xoq, ku adkeyso biyo muddo ku dhow hal maalin iyo badh. Biyaha ku daadi baaquli iyo ku dar 1 tbsp. l malab, 1 tbsp. l juice karo, 1 tbsp. l juice ka soo xididdo iyo liin. Walaaq dareeraha, qaad 1 tbsp. l laba jeer maalintii hal saac ka hor cuntada. Kooras buuxa waa bil iyo badh bilood.
Fareemka cufan 2 tbsp. l Shub 200 ml oo caano ah, isku kari ah. Cadaadiska, qabow, cabi maalintii.
150 garaam oo shabaggii malayga, tuujin halkan juice laba liin.
Qaado calool madhan subixii subaxdii.
Ka hor intaadan qaadin, kuleyl yar, ku kaydi qaboojiyaha.
Waa muhiim! Cuntada xayawaanku waxay caawisaa qufac qallalan oo keena boronkiitada.
Sanka oo dhan
Xididka malayga leh qabow waxaa la sifeynayaa haraamida, oo isku qasan juuska laba ama saddex liin. Qaado nus nus qaado qaaddo laban jeer maalintii cuntada ka dib.
Ciriiri - dabeecadda neuralgic ee qallafsan. Horseradish xidid 200 garaam oo ku dar boqoshaada, ku dar 500 garaam, saliid saytuun 500 ml, isku daraan mass ilaa dabaq. Ku kaydi qaboojiyaha. Qaado saddex jeer maalintii kahor intaadan cunin labaatan daqiiqo ilaa 1 tbsp. qaaddo. Caleemaha malayga waxaa lagu dabaqaa meelaha ugu badan ee u nugul duufaanka.
Daaweynta xajmiga daawada dabiiciga ah ee dawada dabiiciga ah ayaa si fiican loogu daraa qubeyska. Diyaarso isku dar ah dabocjada juuska iyo malayga si siman loo siman yahay, ku dar qanjaruufo cusbo ah iyo labo qaado oo malab ah. Ka dib markaad isku dhajiso, dhabarkaaga ku sii foorno isku darka. Qabo soddon daqiiqo, ka dibna raaci.
Haddii bacda aan la heli karin, waa inaad karisaa xoqin. Iska yaree juuska malayga iyo biyaha qaybo siman si diirran ugu noqo dawlad diiran, xoqin dib u xanuun iyo duub.
Nadiifinta alaabada malayga ku jirta jirka ayaa loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo marinnada dhiigga waxayna hagaajiyaan wareegga dhiigga.
Si aad u nadiifiso weelasha waxaad u baahan doontaa:
Qanjaruufo caleemo qallalan
1 basbaas cas oo qadhaadh ah
Walnut Qaybta Qaybaha
Qanjaruufo qolofka lowska
500 ml oo khamri ah
Dhammaan maaddooyinka isku dhafan, ku adkeyso toban maalmood, waxay u badan tahay inay ku adkeystaan ​​saxan cad. Qaado biyo qaboojiye soddon dhibcood, qaado laba jeer maalintii. Koorsada daaweynta waa soddon maalmood.
Diyaarinta iyo kaydinta alaabta ceeriin laga bilaabo malayga si ujeedooyin daaweyn
Daaweynta, caleemaha geedka iyo xididka labadaba waa la isticmaalaa. Qalabka ceeriin ee la kariyey dhammaadkii Sebtembar - horraantii Oktoobar. Caleemaha ayaa la gooyaa, taarikada oo dhan waa la saaraa oo la qalajiyaa hooska. Markaas waa la jajabiyey, ku rid dhalooyinka ku jira, si adag u daboolay daboolka.
Xakameynta dhirta waxaa loo diyaarin karaa laba siyood:
Roots waa la qodayaa, nadiifiyaa dhulka oo lagu kaydiyaa sanduuqyada, rusheeyey ciid, qarsoodiga ama maqaasiinka. Iyada oo kaydinta this, xididka ku hayaan sifooyinka faa'iido leh.
Root khafiif ah, si fiican u maydheen, la jajabiyey qadka. Wax badan oo la qalajiyey foornada. Waxaa lagu kaydin karaa qaybo jajab ah, waxay noqon karaan dhulka budo leh Booqday Furimaha Dagaalka. Ku kaydi weel dhalada leh dabool leh.
Dhibaato noocee ah ayuu malayga qabtaa?
Baalalka ku jira halabuurka malayga, taas oo siisoconta dhadhanka iyo urta, tiro badan ayaa waxyeeli karta caafimaadka. Saliidda Allyl, marka la isticmaalo maxaliga, waxay keeni kartaa gubasho, maqaarka, iyo xitaa gangrene. Uumaatada neefsashada waxay keeni kartaa qufac iyo gubasho xuubka xuubka (xaddiga sare).
Laguma talinayo in badanaa iyo in badan oo aad u isticmaasho cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka, sida boogaha iyo gumaacada. Waa wax aan loo baahnayn in ay ka badato marka ay jirto xaalad ah cuduro beerka iyo kilyaha. Looma baahna in la siiyo caruurta yar yar iyo haweenka uurka leh. Walxaha firfircoon ee malayga waxay keeni kartaa kororka ilmagaleenka ilmo-galeenka wuxuuna sababi karaa diidmada uur-kujirka.
Digniin! Xasaasiyadda xayawaanku waa inay cunaan fareemka cusub si taxaddar leh.
Dumar badan, ogaansho ku saabsan kalooriyada yar ee malayga, waxay bilaabeen inay si firfircoon ugu adeegsadaan miisaanka lumitaanka. Qadar ballaaran oo badeecaddu waxay keeni kartaa cadaadis kororka. Haweenka muddada maalmaha muhiimka ah waa inay iska dhaafaan isticmaalka malayga, waxay kicin doonaan dhiigbax kordhaya.
Ma aha lagama maarmaan in la isku daro daweynta maandooriyeyaasha ee daroogooyinka halkaas oo ay ku jirto maqaayad, iyada oo cuntooyinka dadku ay ka helaan malayga. Horsaati wuxuu dhexdhexaadiyaa saameynta daawooyinka noocan oo kale ah.
Xitaa badeecada ugu faa'iido badan leh iyo fitamiinada tiro badan ayaa keeni kara cawaaqib aan loo baahnayn. Cunista waa in ay ahaato mid dhexdhexaad ah, ma aha in lagu xuso mukhaadaraadka.